कांग्रेस सोलुमा त्रिपक्षिय भिडन्त, को बन्लान् सभापति ? « Emakalu Online
कांग्रेस सोलुमा त्रिपक्षिय भिडन्त, को बन्लान् सभापति ?
सोलुखुम्बु । नेपाली कांग्रेस पार्टी सोलुखुम्बु प्रष्ट दुई समूहमा विभाजित छ । ती समूहको नेतृत्व कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व मन्त्री बल बहादुर केसी र पुर्व पार्टी सभापति आङगेलु शेर्पाले गर्छन् । यी दुई समूहको आ–आफ्नो कित्ता जारी कांग्रेस अधिबेशनले छर्लङ्ग देखाएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न प्रदेश अधिबेशनमा प्यानलै बनाएर निर्वाचन लडेका केसी र शेर्पा समूहले एक एक प्रदेशमा जितेका छन । आजदेखि शुरु जिल्ला अधिबेशनमा पनि यी दुई समूह प्यानलै बनाएर निर्वाचनमा जाने भएका छन् । केसी समूहले कांग्रेस नेता विनोद बस्नेतको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको छ भने त्यस्तै शेर्पा समूहले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका यूवा नेता नाम्गेल जाङबु शेर्पाको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको छ ।
जिल्ला नेतृत्वको हिसावले शेर्पा नयाँ अनुहार हुन् भने बस्नेत पुरानो अनुहार हो । बस्नेतले यसअघि कै कार्यकालमा सभापतिको पद सम्हालेका थिए । शेर्पा पक्षले नेतृत्वमा पुस्तान्तरण बहस चलाउदै फ्रेस अनुहारलाई जिल्ला नेतृत्व दिने गरि टिम तयार पारेको छ ।
केसी समूहमा सभापतिमा बस्नेत सहित उपभापतिमा घनराज सुनुवार र फुदोर्जी शेर्पा, सचिवमा भलाकाजी कुलुङ र यूवराज घिमिरे उम्मेद्वार बन्ने छन् । सह–सचिव पदका लागि मान बहादुर राई र ङिमछिरी शेर्पा निर्वाचनमा होमिनेछन् । त्यस्तै शेर्पाको प्यानलबाट जिल्ला उपसभापतिमा सुर्य कुलुङ र गणेश बस्नेत उम्मेद्वार बनेका छन् । सचिव पदका लागि दावागेलु पाख्रिन र सविता राई अघि सारिएको छ । सह–सचिवमा उत्रमान राई र नविन बस्नेत निर्वाचनको मैदानमा हुनेछन् ।
सभापति पदका आकांक्षि कांग्रेस नेता राम बहादुर बस्नेतले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् । अघिल्लो अधिबेशनमा पनि उम्मेद्वारी दिएका उनी यो पटक पनि सभापतिका लागि उम्मेद्वार बनेका छन् । जिल्लाभरका ९ सय बढि क्षेत्रीय प्रतिनिधिले मतदान गर्ने निर्वाचनमा आज मनोनयन दर्ता गरिदैछ । जिल्ला नेतृत्व चयनका लागि भोली मतदान हुने नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।